Anjara toeran' ny fiompianaHanova
Fiompiana sy toetry ny faritra iompianaHanova
Anton' ny fiompianaHanova
Fiompina mifandray amin' ny fivavahanaHanova
Tao Grisia sy tany RômaHanova
Any India dia andiana ahitana omby 100 tapitrisa any ho any, izay heverina ho masina nefa mijaly, no miaina eo amin' ny varavaran' ireo tempoly maro.
Tsy mivavaka amin' ny omby ny mponina aty Afrika atsimon' i Sahara nefa manaja sy mikarakara fatratra azy ireo. Aty Madagasikara dia ambony noho ny asa rehetra ny fiompiana omby. Any amin' ny faritra atsimo amin' ny Nosy dia azo lazaina fa ny omby no tena tompon' ny tany, ary ny halatra omby dia heverina ho fampiasan-tena manan-kaja. Toraka izany koa ny vahoala folany (fr. Peuls), izay mpiompy omby eny amin' ny fatrana any Sodàna, izay manana andian' omby maro noho ny antony maro, tsy ara-toekarena ihany: mampitombo ny isan' ny biby ompiany izy ireo, mba hahatonga azy ireo ho isan' ny saranga ambony fa tsy hahatonga azy hanan-karena; raiki-pitia amin' ny andian' ombiny izy ireo ka izany no ilazana io fiompiana ataony io ho fiompiana “ara-pihetseham-po”.
Fiharavan' ny fiompiana ara-pivavahanaHanova
Fiompiana biby efa-tongotraHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiompiana&oldid=1010891"
Dernière modification le 16 Aprily 2021, à 10:10
Voaova farany tamin'ny 16 Aprily 2021 amin'ny 10:10 ity pejy ity.